ရုရှားအတွက် ANDROID အတွက် CLOCK WIDGET ကများနှင့်ရာသီဥတု - အန်းဒရွိုက် - 2019
UltraISO - နှစ်ဦးစလုံး CD / DVD ကို drive တွေကိုအတူလုပ်ကိုင်ဘို့နှင့်၎င်းတို့၏ပုံရိပ်တွေနဲ့ဘက်စုံသုံးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဤအစီအစဉ်၌ကြွယ်ဝ functionality နဲ့ကိုတွေ့ဤမျှလောက်များစွာသောမှားယွင်းမှုများ၏။ အသုံးအများဆုံးပြဿနာများကိုအမှန်တကယ် disk ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတိကျစွာတဲ့အခါမှာပျေါပေါကျ, နှင့်အကြောင်းပြချက်ကeအဖြစ်«ရေး mode ကိုစာမျက်နှာချိန်ညှိခြင်း»ဖြစ်ပါတယ်။
UltraISO ကို download လုပ်ပါ
«မှားယွင်းနေသည်ရေးသားမှု mode ကိုစာမျက်နှာ setting » bug တွေကို fix လုပ်နည်း
ဒါဟာအမှားက Windows ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် UltraISO က CD / DVD ကိုဖြတ်တောက်စဉ်အတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အမှား၏အကြောင်းရင်းစိတ်ညစ်စရာထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ မှားယွင်းမှုတစ်ခုကြောင့် AHCI mode ကိုအတူပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်, ဒီမှာကသငျသညျပျောက်နေသည်သို့မဟုတ်ခေတ်မမီတော့နေကြသည်ဟုဆိုလိုသည်, AHCI controller ကိုမောင်းသူ။
အမှားမှမရှိတော့အကောင်းဆုံးကိုမောင်းသူ download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုအပ်သောပုံပေါ်ပါတယ်။ သငျသညျနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ဤသို့ပြုနိုင်သည်
1) သင်ခန်းစာ: DriverPack Solution ကိုအသုံးပြုပြီးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းကို update လုပ်နည်း
2) ကိုယ့်ကိုယ်ကို Download လုပ်များနှင့်ထည့်သွင်းပါ။
ဒုတိယနည်းလမ်းခက်ခဲပုံပေါ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကပထမဦးဆုံးထက်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့နေကြတယ်ဆိုတာကို chipset ကိုထွက်ရှာတွေ့မှစတင်မောင်းသူ AHCI-လက် controller ကို update လုပ်ဖို့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပေါ်တွင် right-click နှိပ်. "စီမံခန့်ခွဲမှု" ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်သော Device Manager, သွားပါ "My Computer ကို။ "
ထိုအခါငါတို့သည်ငါတို့၏ controller ကို AHCI ရှာပါ။
အဲဒီမှာပါလျှင်တစ်ဦးစံ Controller, Processor ကို၏အာရုံလည်းမရှိ။
ကျွန်တော် Intel ရဲ့ Processor ကိုကြည့်ရှုလျှင်, သငျသညျသငျ့သနှင့် Intel ရဲ့ controller နှင့်သင်အလွယ်တကူကားမောင်းသူဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် Intel ကတာဝန်ရှိသူတဦးက site ကို.
သင်တစ်ဦး Processor ကိုကုမ္ပဏီ AMD ၏, အတူလွှဲရှိပါက AMD ၏တာဝန်ရှိသူတဦးက site ကို.
ယင်းနောက်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာ, သင်ကွန်ပျူတာ UltraISO များ၏ထိရောက်မှုစစ်ဆေးပြန်လည်စတင်ရန်အပြီး။ ဤအချိန်တွင်ပြုလုပ်မဆိုအမှားများကိုမပါဘဲအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကပြဿနာကိုထွက်နေသေးတယ်နှင့်ဤအမှားပြင်ပေးဖို့နှစ်ခုဖြေရှင်းချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအလမ်း, သင်တန်း, အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ website ကိုမှာအမြဲတမ်းဒရိုင်ဘာ၏လတ်တလောဗားရှင်းဖြစ်ပြီး, ယာဉ်မောင်း Pack ကိုဖြေရှင်းနည်းအတွက်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုမှရရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအများကြီးနိမ့်သည်။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကသူမထိုက်မတန်မြင်သည့်အတိုင်းပါဘူး။ သငျသညျ updated ရသောတစ်ဦးကလမ်း (installed) ကိုယာဉ်မောင်း AHCI-controller ကိုပေါ်?
ဗီဒီယို Watch: 10 ways Android is just better (နိုဝင်ဘာလ 2019).